Fikarohana momba ny firaisana Tantara momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny Phobias, talenta sy foto-pinoana amin'ny fiovana: Famerenana amin'ny laoniny ny fahaveloman'ny famonoana namono olona | David Llewelyn - Fikarohana Reincarnation
David Llewelyn dia manana Papa jiosy miafina fa kristiana ambony
Teraka tany Chester, Angletera, i David Llewelyn tamin'ny Septambra 1, 1970. Ny reniny Susan Llewelyn dia Welsh. Tamin'ny fotoana nahaterahan'i Davida, dia nanambady an'i Jeffery Llewelyn izy, fa i Solomon Rosenberg, ray aman-drenin'i David, dia lehilahy jiosy izay nananan'i Susan nandritra ny roa taona.
Nafenin'i Susan tamin'i Jeffery vadiny ny raharaha tamin'i Solomona. Noho izany dia natsangana ho zanak'i Susana sy Jeffery i Davida. Niara-nijanona tamin'izy ireo ny mpivady farafaharatsiny mandra-pahatonga an'i Davida sivy taona ary toy izany, dia nobeazina tao amin'ny kolontsaina Kristiana i Davida. Susan sy Jeffery Llewelyn nisara-panambadiana.
Nanamarika i Susan fa nahita an'i David imbetsaka i Solomon Rosenberg, saingy tsy liana na oviana na oviana an'i David. Tsy nahalala i Davida fa i Solomona no rainy niteraka azy.
Nifandray i Susan Ian Stevenson, MD momba ny raharaha momba ny vatana vaovao indray taorian'ny nahenoany azy tao amin'ny programa fahitalavitra BBC momba ny vatana vaovao indray tamin'ny 1982. Taorian'ny fotoam-piraketana, dia nandeha tany Chester, Angletera i Stevenson mba hihaona amin'i David sy Susan.
Fahatsiarovana an-davanandro: fitifirana lalina na havoana misy vatana
Tamin 'ny ankizilahy kely, dia nanamboatra zava-mahatsiravina i Davida, ary nisy lavaka lehibe sy maizina ary misy lalina. Nofoka ny fofon'ny fatin-koditra izy ary natahotra izy hidina any amin'ny lavaka. Nisy olona nanana basy.
Indraindray dia nitomany tany amin'i Susan i David nitantara ireo toby, basy ary ireo olona efa maty izay hitany tao amin'ny nofiny. Nitaraina tamin'ny fofona tsy mahazatra tao amin'ny efitrano fandriany izy.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha tao amin'ny efitrano fivoahan'ny gazy
Tao an-trano dia niasa tao amin'ny fatana elektrika ny fianakaviana. Rehefa nitsidika ny nenitoany iray izay namono tamin'ny entona izy, dia nilaza i David hoe "tahaka ny fofona tao amin'ny efitranoko ny alina, dia handevona ahy izany." (1) Nampiasa gazy ny Nazis, toy ny monokide karbona na sulfide Hamono ny lasibatry ny lasibatra.
Nanana sary momba ny fiainana lava koa i David tao an-tsainy nandritra ny ora maromaro. Ireo sary ireo dia ahitana olona nigadra tamin'ny ady izay niaina tao anaty trano. Nihevitra i Davida fa Jiosy ireo olona ireo.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Nahatsiaro i Davida fa navela ho lavaka izy
Rehefa nanadinadina azy i Ian Stevenson, dia nilaza i David fa nahatsiaro ny fahatsiarovan-tenan'ny fiainana izy, izay nampidirina am-ponja fony izy zazalahy kely. Tsaroany fa nijery ny tampon'ny lavaka izy ary nahita ankizilahy iray nijery azy. Nihevitra izy fa mpiara-mitory izay afaka mamonjy azy. Nisy vatana hafa tao amin'ny lavaka. (2) Imbetsaka ity sary ity ary nilaza tamin'i Stevenson i David fa tsaroany ny fofona mampihoron-koditra tao amin'ny toby.
Nanamarika i Stevenson fa tany amin'ny toby fitanan'i Nazi, dia novonoina ny ankizy 14 taona sy tanora, satria noheverina ho tsy mahomby izy ireo. Nilaza i Stevenson fa tany amin'ny toby fitanan'i Treblinka, dia "natsipy tao anaty lavaka iray ny ankizy, indraindray mbola velona, ​​ary levon'ny afo. Mety ho natsipy tao amin'ny 'fasana maherin'ny olona' koa izy ireo. "(3)
Fiainana taloha & fahalalana momba ny fomba amam-panao jiosy: manoratra avy amin'ny ankavia ka hatramin'ny ankavanana, Sakafo Kosher ary Kippahs
Ny endrika mampihetsi-po indrindra amin'ity tranga ity dia rehefa namaky sy nanoratra i David, dia namaky sy nanoratra avy hatrany teo ankavanany izy, izay ny fomba famakiana sy ny soratra amin'ny teny hebreo. Tsy nisy nampianatra azy hanao izany, fa nampianarina hamaky sy hanoratra amin'ny fomba mahazatra anglisy, avy eo ankavia miankavanana. Na dia nanitsy azy aza ny mpampianatra dia nanohy nanoratra io fahazarana hebreo io izy nanomboka teo an-kavanana hatramin'ny havia mandra-pahatongan'ny 11 taona.
Nanaitra ny reniny i David, tamin'ny mbola kely, raha nanontany hoe raha misy rà ao aminy ny sakafo azony, dia manondro ny fikarakarana ny hena kosher. Tsy nisy nanambara tamin'i Davida ny momba ny fomban'i Kosher. Rehefa nandeha tany amin'ny tanàna hafa izy sy ny ray aman-dreniny raha sivy, dia nijery trano iray tahaka ny fiangonana i Davida. Hoy izy tamin'ny ray aman-dreniny: "Mitafy kapa any izy ireo. Nanamarika i Jeffery, vadin'i Susan, fa synagoga jiosy ilay trano. Niresaka momba izany i David Kippahs ny olona jiosy.
Fiainana taloha Phobias of the Star of David, the Color Yellow, Camps & German People
Rehefa naka sarin-tsoratra i David, dia nampiditra kintana foana izy, na dia tamin'izany fotoana izany aza dia toa nanana karazana kintana izy. Raha vao 12 taona izy dia nentin'i Susan tao amin'ny fivarotana iray i David izay nahita ravina misy Kintan'i Davida mifandraika amin'izany. Avy eo i Davida dia nanomboka nitomany ary nihazakazaka teny an-dalambe. Nihazakazaka nanaraka azy i Susan ary nanontany azy izay nanelingelina azy. Nilaza i Davida fa ny "kintana" dia ny "kintana" (Davida). (3)
Nanamavo ny loko mavo ihany koa i David. Nilaza i Susan fa "halan'i" Davida. Nanao kofehy mavomavo tamin'ny akanjon'izy ireo ny Jiosy nazia nataon'ny Nazia, mba hahafahany hanavaka ny Jentilisa. Nanana tahotra mafy momba ny toby koa i Davida. Rehefa nilaza taminy i Susan fa tena mahafinaritra ny fialan-tsasatra any amin'ny toby, dia namaly i David hoe:
"Tsia Tsy misy fahasambarana any. Voageja sy mangatsiaka, noana ary matahotra ny olona. Tsy hilavo lefona izy ireo. "(4) Nilaza i David fa ny olona ao anaty toby dia toy ny taolam-paty, sola izy ireo ary tsy nanana sakafo. Davida dia niteny tamim-pahakiviana hoe: "Manahy ny amin'ireo olon-kafa aho. Nahoana no nitranga izany? Nahoana no tsy maintsy nitranga izany? "(5)
Nanantitrantitra i Susan, renin'i David, fa tsy nianatra momba ny Holocaust i David, Ny toby fitanan'i Nazi na fomba amam-panao jody toy ny zaza ao an-tranony. Rehefa antitra i David dia hitany fa rehefa nahita ny Alemana tao amin'ny fahitalavitra dia nanjary natahotra sy tezitra izy. Toy izany koa, nasehony ny tahotra sy ny hatezerana rehefa nahita ny alemana izy tamin'ny fialantsasatra izay nentiny niaraka tamin'ny reniny nankany amin'ny nosy Corfu.
Famintinana sy fanadihadiana momba ny tranga taloha
Ny fiainan'i David taloha tany amin'ny toby fitanana dia tsy azo valiana ara-tantara, satria tsy nahatsiaro ny anarany na nanome tsipiriany hafa izay afaka mamela fanamarinana.
Ny tanjon'ity tranga ity dia miorina amin'ny fahalalan'i Kenana ny fombafomba jiosy, toy ny famakiana sy ny fanoratana avy hatrany amin'ny havanana miankavia ary ny fahatsiarovana ireo sehatra misy ny toby fitanan'i Nazi. Ny renin'i David, Susan, dia nandà mafy fa afaka nianatra an'io fampahalalana io tamin'ny fomba mahazatra i David.
Raha toa ka naharay an'i David Rosenberg io fahalalana io avy amin'i David, ny rainy niteraka azy, tamin'ny alalan'ny fahatsiarovan-dry zareo, dia hoy i Dr. Stevenson:
"Na dia ny mpahay siansa aza dia tsy manoro hevitra fa ny fototeny dia mampita ny fahazarana mamaky teny sy manoratra avy any ankavanana mankany amin'ny ankavia, ny ahiahiny raha misy ra ao anatiny ary sarin'ny toby fitanana." (6)
Talenta sy fahalalana taloha: Rehefa nanomboka namaky teny sy nanoratra tamin'ny fiteny Anglisy izy, dia nanao izany avy hatrany teo ankavanan-tanana izy, izany no fomba fampiasa amin'ny teny hebreo. Na dia nanandrana nanitsy an'io fanao io aza ny mpampianatra, dia mbola nanohy izany fampiharana izany i David mandra-pahatongan'ny taonan'ny 11. Toa nahalalany ny fahalalany voajanahary momba ny sakafo Kosher sy Kippahs.
Fiafaran'ny fiainana Phobias: Nanana tahotra ny Kintan'i Davida i Davida, ireo loko mavo, vakansy ary ireo Alemana.
Fiovan'ny finoana sy ny fiaraha-monina: Tao amin'ny fiainany taloha i David dia maty ho zazalahy tanora tao amin'ny toby fitanan'ny Nazia. Nifindra tany amin'ny fianakaviana kristianina indray i Davida ankehitriny. Na dia Jiosy aza i Davida, ray niteraka an'i Davida, dia tsy nahafantatra an'io fifandraisan'ny ray aman-dreny io i Davida tamin'izy mbola kely, satria i Susan reniny no nitana ny heviny tamin'i Solomona.
Ny tranga iray mampihetsi-po sy mampihetsi-po tahaka izao dia ny Anne Frank | Barbro Karlen ny raharaha momba ny fanambadiana, satria i Anne ihany koa dia nenjehina toy ny Jiosy tany amin'ny toby fitanan'i Nazi, nefa dia niverina tany amin'ny fianakaviana Kristiana tany Soeda indray i Barbro Karlen. Raha fantatry ny Nazis sy ny Alemà fa mety ho teraka jiosy amin'ny fiainana iray manontolo sy kristiana amin'ny hafa ny olona iray, dia tsy mbola nisy ny Holocaust na oviana na oviana. Amin'izany fomba izany, ny porofon'ny firindran'ny vatana indray dia afaka manampy amin'ny fananganana tontolo milamina kokoa.
(1) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 82
(2) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 82
(3) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 84
(4) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 85
(5) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 83
(6) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 83
(7) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 85
(8) Stevenson, Ian: Ireo tranga momba ny fanambadiana tany am-bohoka ao amin'ny vatana vaovao, McFarland, 2003, pejy 85